Chebe saịtị HTML Site na ndị na-eji ihe eji egwu eme ihe site na iji aka na aka. Ọ Dị Mfe Ka ABC!
1. Na-echekwa software niile
Artem Abgarian, onye isi ahịa ndị na-ahụ maka ihe nchịkọta nke Ọkachamara ,kwenyesiri ike na idebe akụrụngwa gị bụ otu n'ime ihe ndị dị oké mkpa ga-enyere aka nweta ebe nrụọrụ weebụ site na mwakpo hacker.Ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ahapụ ntọala na mmelite mgbe niile iji dozie mkpọchi na njehie na plugins ha gara aga. Site na ijide n'aka na ha na-agbazi nke ọ bụlabugs na oghere na koodu ahụ, ụlọ ọrụ ndị a na-ebelata ihe ize ndụ nke ọgụ na ngwanrọ ha - anacaps ducray. Ya mere, ọ bụrụhaala na saịtị ahụ jide n'aka naọ nwere plugins na-adịbeghị anya na-akwado ya, a na-ejide n'aka na otu ụdị nchedo. Otu ihe a na-emetụta ndị nwe ụlọ ahụjiri plugins nke atọ. Onye kwesịrị ijide n'aka na ha na-agbaso mmelite ha ma jide n'aka na ha ga-anọgide na-emelite n'oge ọ bụla. A na saịtịonye nwe ya kwesịrị ikpochapụ ọ bụla plugins na-adịghịzi ma ọ bụ dị mkpa ka ha na-eje ozi dị ka ọnụ ụzọ ámá, nke hackers nwere ike ịchọta naeji agha.
2. Mee Ogwe Nchedo Gburugburu n'Ịntanet
Nzọụkwụ mbu nke nchebe na ebe nrụọrụ weebụ bụ Firewall Firewall Web.Nzube ya bụ inyocha ọ bụla na-abata okporo ụzọ na ọkọlọtọ ọ bụla arịrịọ enyo. Na njedebe, saịtị ahụ na-eme ka ọ ghara ịnweta ibuso cyberna spam. N'oge gara aga, FireWalls Weebụsaịtị dị n'ụdị ngwa ngwa. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ Nche-dị-a-a-ụlọ ọrụ(SECAAS) jiri nkà igwe oji mee ihe dị ka ụzọ dị ọnụ ala iji nye nchedo weebụ, nke a chọtara na ntọala ụlọ ọrụ naanị.Site na teknụzụ nke igwe ojii, ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịgbazite "Firewall Web Wizard" na-enweghị akwụ ụgwọ ndị ọzọ dị ka ịnweta nraranyenkesa nkesa. Ọrụ nkwụnye na-play ndị a nwere njirimara na-eme ihe dị mkpa maka onye nwe ya. Ndị aWindo Firewalls Weebụ nke igwe ojii jupụtara ebe a na-adịghị ebe onye ọrụ nchịkwa ọzọ ga-ada..
3. Gbanwee na HTTPS
Protocol Hyper Text Secure bụ usoro nzuzo nkwukọrịta eji gbanwereozi nzuzo ma ọ bụ nke dị nro. Iji ọrụ HTTPS mee ka nkwukọrịta dị n'etiti ebe nrụọrụ weebụ na ihe nchọgharị bụ ịgbakwunye ihe mgbakwunyeencryption oyi akwa na Nche Transport Layer (TLS) ma ọ bụ Secure Sockets Layer (SSL). Ọ bụ uru nwekwuru uru nke onye nwe yana-echebe ha site na mgbalị hacking, na weebụsaịtị dị ka ọ na-egosi ndị ọrụ na azụmahịa na-arara onwe ya iji kpuchido ozi ha.
Ihe niile n'Ịntanet na-agba ọsọ n'elu usoro HTTPS. Ndị ọzọ fọdụrụ na weebụ ahụ bụHttp na ndabara. Otú ọ dị, nke a nwere ike ịgbanwe dị ka Google kwuru n'oge na-adịbeghị anya na ha ga-amalite iji HTTPS dị ka ọkwa ọchụchọ, nke ga-emepụtara na ọtụtụ weebụsaịtị ga-eme ka ngbanwe ahụ na olileanya nke imeziwanye ogo ha na SERP.
4. Jiri Paswọdu Dị Ike ma Gbanwee Ha Mgbe nile
E nwere mmụba na-atụ egwu na ọnụọgụ ndị agha na-agba ọsọiji nwalee ma o bu okwuntughe okwuntughe. Otu ụzọ isi chebe onwe gị pụọ na ndị dị otú ahụ bụ site na iji okwuntughe siri ike ma dị iche. Ọ dị mkpaiji nwee njirimara ndị a metụtara ha, sava weebụ, na okwuntughe data nchekwa data. Onye kwesiri ịmepụta paswọọdụ nke na-eme ka ojijiihe odide dị iche iche, na ọ dịkarịa ala ihe odide 12. N'ikpeazụ, ndị ọrụ kwesịrị ịgbanwe koodu okwuntughe maka saịtị dị iche iche iji jide n'aka na mmadụ abụọ dị okpukpu abụọechekwa. Ikwuntughe ezoro ezo na-arụ ọrụ ọbụna karịa ka ọ na-eme ka ọ siere ndị hackers ike ịnweta okwuntughe mgbe ha mechara mebie.
5. Mee Nchịkọta Admin Na-achọ Ịkọ
Ndị omekome na-awakpo akwụkwọ ndekọ data iji weghachite data banyere saịtị ahụ. Site na ijiederede ndị na-agba na data a, ha na-agagharị na ịnwa ịbanye na nchekwa ndị dị n'ebe ahụ imebi nchebe. A websiteonye nwe ya kwesiri ijide n'aka na aha ndi edere na ederede aha bu nani ndi mara webmasters.